China abicah abicah intambo ebhityileyo ezilahlwayo ukubamba umvambo ngeengcebiso ezibonakalayoUkuveliswa kunye neFektri | MOLONG
Ukubambelela okunyama okulahliweyo kweTattoo ngencam ecacileyo
Ubungakanani / ukupakisha
Iityhubhu zeTattoo eNtsha ezilahliweyo inombala we-ergonomic, textured, curvy tube design engazukutyibilika okanye ukutyibilika ujikeleze ityhubhu xa usebenza.
(2) itattoo ityhubhu elahlwayo enencam entsha, ubungakanani beepipi ezichanekileyo zinika amagcisa ubugcisa obucekeceke.
Umgangatho ophezulu weTattoo elahlwayo yeTyhubhu eveliswayo kunye nokupakisha.Ipakethe nganye ye-blister itywinwe ngokukodwa, kwaye yenziwe ngaphambili nge-EO gas.
(4) .zonke zenziwe ngerabha yezonyango kwaye zenzelwa ukusetyenziswa ngendlela enye
(5) .sinokwenza isiko-oda, kubandakanya ukubamba umbala, ukongeza uphawu lwakho ibhokisi yakho njalo njalo.
Ukubamba ngokulahlwayo- i-100% yoYilo loqobo nguMOLONG, ukubambelela koyilo kuyilo olusebenzayo, ubugcisa obucothayo kunye nembonakalo yenoveli, edumileyo kubazobi be tattoo behlabathi. Iphakheji efanelekileyo: I-blister ipakishwe ngomatshini wokutywina ozenzekelayo, ukusika kwikona ukunqanda ukuzenzakalisa ngeblister ebukhali. Umgangatho ophezulu wokupakisha kwangaphakathi nangaphandle ukukhusela ukubambelela kwindlela yokuthumela. Unikezelo oluninzi: ii-10 000 ii-pcs ngosuku lokusebenza, i-300 000 ii-pcs ngenyanga njengesiqhelo, ixesha elongezelelekileyo linokufumana ngaphezulu ukuba kukho imfuneko.
Singumvelisi oqeqeshiweyo wezinto ze tattoo. Sinemveliso yethu, kunye nabasebenzi beqela lokuthengisa kunye neengcali zophando kunye nophuhliso. Singavelisa oomatshini be tattoo, ukubamba, iingcebiso, unikezelo lwamandla, isikwere sokutshintsha unyawo, iintambo zekliphu, iinaliti ze tattoo kunye nezinye izinto ze tattoo. Sizinikele ekunikezeleni iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo. Iimveliso zethu zithunyelwa kuwo wonke umhlaba ngokusekwe kumaxabiso okhuphiswano, iinkonzo ezilungileyo kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza. Unokuqiniseka ngokufumana iimveliso ngomgangatho ophezulu kunye nobuchwepheshe obuphambili ukuba ukhetha iimveliso zethu.
Injongo yethu kukuphuhlisa ubudlelwane bexesha elide kunye nabaxumi bethu. Ukufezekisa le njongo, siyaqhubeka sinika abathengi bethu abakhona iimveliso ezintsha kunye noyilo oluphambili. Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso yethu, nceda ukhululeke ukunxibelelana nathi ngolwazi oluthe kratya. Sijonge phambili ekubeni liqabane lakho kwishishini kungekudala.
Egqithileyo Iinyawo zentsimbi yokuTshintsha iTattoo Pedal
Okulandelayo: Umgangatho olungileyo weTattoo Pen Kit Ngaphandle kweMeko yeAluminiyam TZ-008
Ukutshintshwa kweTattoo Grip
Ukulahleka kweTattoo Grip
Ukubanjwa kweTattoo yentsimbi
Isiciko seTattoo Grip
Ukubanjwa kweTattoo kunye neenaliti
Ukubamba iTattoo kunye neeNgcebiso
Tattoo Ink Iikomityi Supply Professional esisigxina T ...
Umgangatho ogqwesileyo we-2.4m yeCopper Silicone Tatto ...
Ezijongene nemiba ngemiba yezemfundo ujikelezo ngesanti kubunzulu baphantsi adjustable t ...